Otu esi eweghachi ngwaọrụ Samsung gị
A gam akporo Nduzi & Nkuzi
Mee ụlọ nrụpụta ụlọ gị na Galaxy S, Ihe Ntuba, ma ọ bụ Tab
Ka ị na-eji Samsung Galaxy smartphone , Cheta, ma ọ bụ Tab, ị nwere ike ịchọta ngwaọrụ gị nwere nsogbu na ngwa ọdịda ma ọ bụ griza, na-eme ụda dị iche iche ma ọ bụ na-eme mkpọtụ ọ bụla, ọ bụghị ijikọta na ngwaọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ ịnata na / ma ọ bụ ime oku . N'okwu ndị a, ịnwere ike ịtọgharịa ngwaọrụ gị gaa na ụlọ ọrụ nrụpụta site na ịmepụta ntọala ụlọ ọrụ n'ime Ntọala Ntọala .
Ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ dị njọ karịa ebe ihe ngebichi gị dị, ma ọ bụ na ị gaghị anabata ihe mkpịsị aka gị (ma ọ bụ S Pen ). N'okwu ahụ, nanị ihe ị ga-eme bụ imepụta nrụpụta nrụpụta nrụrụ site n'iji bọtịnụ ngwaọrụ iji nweta ngwa ngwa nke ngwaọrụ, nke bụ software na- adịgide adịgide esiri na nchekwa nke ngwaọrụ gị.
01 nke 05
Tupu Ị malitegharịa
Ọ bụrụ na data enyere gị aka na Google na akpaghị aka, ihe mmịfe ahụ na-esote Back Up My Data bụ acha anụnụ anụnụ.
Ntọgharị ụlọ ọrụ na-ewepu ozi na data na ngwaọrụ gị gụnyere ngwa niile, ntọala , egwu, foto, na vidiyo. Ntuziaka ndị a maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emetụta mbadamba nkume Samsung Galaxy Tab, Galaxy S smartphones, na Galaxy Note phablets running Android 7.0 (Nougat) na 8.0 (Oreo) .
Mgbe ị setịpụrụ ngwaọrụ gị oge mbụ, gam akporo gwara gị na ọ ga-eweghachite data gị na akaụntụ Google gị na akpaghị aka. Ya mere, mgbe ị setịpụrụ ngwaọrụ gị mgbe nhazi ahụ, ị ​​ga-enwe ike iweghachite ngwa na data gị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na i guzobeghị nkwado ndabere na aka ma ị ka nwere ike ịnweta ngwaọrụ gị, ịnwere ike ịghachite aka aka dị ka ndị a:
Kpatụ Ngwa na Ihuenyo mbu.
Na ngwa ngwa, swipe na peeji nke nwere Ntọala Ntọala (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) wee pịa Ntọala .
Na Ntọala Ntọala, swipe na ụdị ndepụta ruo mgbe ị na-ahụ ígwé ojii na Akaụntụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Kpatụ igwe ojii na Akaụntụ .
Na ihuenyo igwe na Akaụntụ, pịa ndabere na weghachite .
Na Ngalaba Akaụntụ Google, kpatụ ndabere data m .
Na Ndabere Data My Data, kpatụ Gbanyụọ iji gbanwee ndabere. Ngwaọrụ gị ga-emeghachite data gi na Google na akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ịnwe ngwaọrụ Samsung nke na-agba ọsọ nke gam akporo android 7.0 (Nougat), lee otú ị ga-esi jiri aka:
Na Ntọala Ntọala, kpatụ Kwado na Tọgharia .
Na mpaghara ndabere na weghachite, kpatụ ndabere data m .
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịghachite data gị, ị chọrọ adreesị email na paswọọdụ gị dị njikere n'ihi na mgbe ị tọgharịrị mgbe nrụgharịrị n'ihi na ngwaọrụ gị ga - ajụ gị ka ị banye n'ime akaụntụ Google gị. Kedu ihe ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere igodo decryption maka kaadi SD gị, ị ga-achọ ịma isi ahụ, kwa, ka ị nwee ike ịnweta faịlụ echekwara na kaadị ahụ.
02 nke 05
Ntọala Ntọala Ụlọ ọrụ
Kpatụ Ntọala Ntọala Ụlọ ọrụ iji tọgharịa ngwaọrụ Samsung gị na ụlọ ọrụ ntọala mbụ ya.
Nke a bụ otu esi arụ ọrụ nrụpụta ihe na ngwaọrụ Samsung gị:
Na Ntọala Ntọala, swipe na ndepụta ụdị (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) ruo mgbe ịhụ General Management.
Pịa General Management .
Na Nchịkwa General Management, pịa Tọgharia .
Na ntinye Reset, pịa Ntọala Ntọala Ụlọ ọrụ .
Na Ntọala Ntọala Ntọala nrụpụta, pịa Tọgharia ma ọ bụ Tọgharia ngwaọrụ , dabere na ngwaọrụ ị nwere.
Kpatụ Wepụ Ihe niile .
Mgbe nkeji ma ọ bụ abụọ, ị ga-ahụ ihuenyo gam akporo. Pịa bọtịnụ V olume na V ruo mgbe ahọpụtara Nhọrọ data / ntọgharị nrụpụta.
Pịa bọtịnụ Ike .
Na ihuenyo ịdọ aka ná ntị, pịa igodo olu ala ruo mgbe a na-eme ka nhọrọ Ee.
Mgbe sekọnd ole na ole, ihuenyo ntụrụndụ gam akporo Mgbapụta Reboot na nhọrọ a họọrọ. Pịa bọtịnụ Ike iji malitegharịa usoro gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ Samsung na-agba ọsọ gam akporo 6.0 (Marshmallow) ma ọ bụ nsụgharị mbụ, ebe a bụ otu esi arụ ụlọ nrụpụta ụlọ ọrụ:
Na Ndabere ndabere na Reset ihuenyo, kpatụ Ntọala Ntọala Ụlọ ọrụ .
Na Ntọala Ntọala Ntọala Ụlọ ọrụ, pịa Ntọgharị Ngwaọrụ .
Mgbe ngwaọrụ gị laghachiri, ị na-ahụ ihuenyo Welcome na ị nwere ike melite ngwaọrụ gị.
03 nke 05
Mee nzaghachị siri ike maka ọtụtụ ngwaọrụ Samsung
Dabere na ngwaọrụ ị nwere, ị nwere ike ịhụ ihuenyo Samsung mgbe nrụgharịrị nrụpụta.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ nrụpụta nrụrụ, ntuziaka ndị a na-etinye maka ụdị niile nke:
Samsung Galaxy S ma e wezụga Galaxy S8 na S8 +
Samsung Galaxy Cheta ma e wezụga Galaxy Cheta 8
Ntuziaka maka Galaxy S8, S8 +, na Nkọwa 8 na-egosi na ngalaba na-esote.
Gbanyụọ ngwaọrụ gị tupu ịmalite nrụpụta nrụpụta site na ijide bọtịnụ Ike maka 10 sekọnd. Ugbu a na-agbaso usoro ndị a iji rụọ nrụpụta nrụrụ:
Pịa Ike , Mpịakọta , na bọtịnụ Home n'otu oge ahụ. Rịba ama na ị nwere ike ịhụ nza na-asị, "Ịwụnye melite" na "Ọ dịghị iwu", mana ị gaghị eme ihe ọ bụla n'ime ngebichi ndị a ma ọ bụrụ na ị na-echere ka ihuenyo gam akporo Ngosipụta.
Na ngosipụta ihuenyo gam akporo, pịa bọtịnụ Mpịakọta Mbula ruo mgbe ịhọrọ Nhọrọ data / Ntọala nrụpụta nhọrọ.
Na ihuenyo ịdọ aka ná ntị, pịa bọtịnụ Mpịakọta Bọtị ruo mgbe a na-eme ka nhọrọ Yes.
Mgbe sekọnd ole na ole, ihuenyo ntụrụndụ gam akporo Mgbapụta Reboot na nhọrọ a họọrọ. Pịa bọtịnụ Ike iji malitegharịa ngwaọrụ gị.
Mgbe ngwaọrụ gị malitegharịrị, mgbe nkeji ole na ole ị ga-ahụ ihuenyo Welcome ahụ wee nwee ike idozi ngwaọrụ gị.
04 nke 05
Galaxy S8, S8 +, na Cheta 8 Ike Sighachi
Galaxy Note 8 na-alaghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe-mbụ ihuenyo Home mgbe ị degharịrị ya.
Ntuziaka maka ịrụ ọrụ nrụpụta na Galaxy S8, S8 +, na Cheta 8 bụ ubé dị iche iche karịa ndị ọzọ Galaxy ngwaọrụ. Mgbe ị kwụsịrị ngwaọrụ gị site na ijide bọtịnụ Ike maka 10 sekọnd, soro usoro ndị a:
Pịa Ike , Mpịakọta , na bọtịnụ Bixby n'otu oge ahụ ruo mgbe ị ga-ahụ logo Samsung. Rịba ama na ị nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ na-asị, "Ịwụnye melite" na "Ọ dịghị iwu", ma ị gaghị eme ihe ọ bụla na ngebichi ndị a ma ọ bụrụ na ị na-echere ka ihuenyo Ntọala Android ga-apụta.
Kedu ihe na-eme ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịghachite?
Pịgharịa gaa ala iji lelee ozi ndị ọzọ ma ọ bụ chọọ maka isiokwu dị na igbe Nkwado Search.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị agaghị ebuutụ ka ị nwee ike ịtọ ya, ị ga-akpọtụrụ Samsung ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ ya maka ozi na / ma ọ bụ nkata n'ịntanetị, ma ọ bụ site n'ịkpọ Samsung na 1-800-SAMSUNG (1-800-726 -7864) site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere 12 nke ụtụtụ site na Monday site n'elekere Friday ma ọ bụ site n'elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere 11 nke ehihie na nkwụsị izu. Ndị otu na-akwado ọrụ Samsung nwere ike ịjụ gị maka ịnwere ịnweta ngwaọrụ gị iji lee ya ma hụ ma ọ ga-ezigara ha ka ha rụọ ọrụ.
Otu esi emezie Android site na Ntọala
Olee otú iji nweta ume Emojis na gị gam akporo
Otu esi dochie SIM & Kaadị nchekwa na Samsung Galaxy S7 / Edge
Olee otú edekọ ekwentị Oku na ekwentị gị
Otu esi eme ka ekwentị gị gụọ ederede gị
Otu esi eji Dual Sight na Nokia 8
Nkuzi Smartphone: Gbanwee LG G Flex SIM Kaadị
Olee otú Childproof gị gam akporo na-eme ya nwa enyi
Zipu Ama Gị na ekwentị ekwentị site na Google na Kọmputa gị
Atụmatụ ịchọta Isi Iyi na Fund Your Development Development
Kedu ihe bụ Enterprise 2.0?
Nkọwapụta ihe dị na Okwu Microsoft
Bụrụ Onye Gbasara Linux Na 10 Nzọụkwụ
Betrayal na Krondor - Free PC Game
Tụgharịa foto ma ọ bụ eserese na ntaneti ọkpụkpọ
Ị nwere ike iji oge ihu na Windows?
Ịmepụta isi na aha na DVD echekwara
Skylanders: Spyro's Adventures - Review Game
Enweghi Ùgwù n'ahù na ǹtò HTML gị
Nhazi weebụ na Dev
Esi Ndozi Msvcr100.dll achọtaghi ma ọ bụ ezighi ezi
Jiri Skype na android
Debe Malịa gị na PC site na Nchekwa Nzuzu izu
Onye nyocha Windows Key Find v1.0
Sony na-enye nkọwa na ụgwọ maka 2016 TV Line-Up
N'ihi ya, I Chọrọ Ịga Minecraft ...
A Guide to Creating SQL Server 2012 Akaụntụ Akaụntụ
PCI (Njikọ Ụlọ Elu Interconnect) na PCI Express
Ndị na-ele ihe nkiri STL - Mmemme Ntughe na Open Source Iji budata
Mbido Mbibi Free PC Game Download
M iPhone App Na-arụ Ọrụ na My iPad? Kedu ka m ga-esi dee ya?